Khulisa ukuhanjiswa kwakho kunye nePakeji yokuNgqinisisa yokuThumela yamafu | Martech Zone
Khulisa ukuhanjiswa kwakho kunye nePakeji yokuNgqinisisa yokuThumela yamafu
NgoMvulo, nge-28 kaDisemba ngo-2020 NgoLwesibini, nge-29 kaDisemba ngo-2020 Douglas Karr
Uninzi lweenkampani ezithumela i-imeyile ziyayixabisa ngokwenene indlela ekuhanjiswa ngayo okunokuthi kuchaphazele umbutho wazo. I-imeyile entle, eyakhiwe kakuhle, kunye nokusebenza ngokukuko inokufikelela kwifolda ye-junk yomntu obhalisileyo kwaye onqwenela ukuguqula nenkampani yakho. Yimeko embi ukuba ube kuyo.
Okubi nangakumbi kukuba, usenokungazi nokuba ii-imeyile zakho zigqithiselwa kwinkunkuma ngaphandle kokuba usebenzisa i Isixhobo sokujonga inbox. Ingcebiso yam yoku ngamaqabane ethu 250ok, endikumsebenzisayo ukubeka esweni ukufakwa kwebhokisi yam engenayo. Benza oku ngokubonelela ngoluhlu lwembewu kwaye bajonge ezo bhokisi zebhokisi, emva koko banike ingxelo kuwe ukuba ngaba i-imeyile yakho iyenzile na kuMboneleli weNkonzo ye-Intanethi.
Igama lakho le-imeyile linokuchaphazeleka kuyo nayiphi na imiba, kodwa uninzi lwayo luye kwimiba emihlanu:
uqwalaselo -Ngaba ithambeka lakho kunye neseva ye-imeyile emiselweyo ukuze ii-ISPs zingangqinisisa ukuba ii-imeyile zivela ngokwenene kwinkampani yakho?
uluhlu -Idilesi zakho ze-imeyile zihlaziyiwe, zisemthethweni, kwaye zikhethwe kwi-imeyile yakho? Ukuba akunjalo, amathuba okuxelwa njenge-SPAM aphezulu kakhulu
Ubume - ngaba ukuthumela i-IP kuyaziwa ngokuthumela i-SPAM ngeengxelo ze-junk? Ngaba kuye kwahlulwa amagama ngaphambili?
umqulu -Ngaba uthumela umthamo omkhulu wee-imeyile? I-imeyile ngobuninzi ithumela ngokuqinisekileyo ukubekwa esweni okungqongqo kwabathumeli.
umxholo - unayo iiflegi ezibomvu ezinesigama osisebenzisayo kwi-imeyile yakho? Ngaba uthumela ii-imeyile ezininzi kunye nee-URLs ezimbi, imimandla ebekelwe i-malware, okanye usilela kwikhonkco lokungabhalisi kwii-imeyile zakho?
Iphakheji yokuNgqinisisa yokuThumela yamafu
Ukuba uthumela ngaphezulu kwe-imeyile ezingama-250,000 ngenyanga kunye Ukuthengisa kweLifu lokuThengisa Umxhasi, kuya kufuneka utyale imali kwiPakethe yokuNgqinisisa yoMthumeli, sisimo esomeleleyo sokuqinisekisa ukuba ukwandiswa kokuhanjiswa kwemiyalezo kwi-inbox. Inkqubo ye- Iphakheji yokuNgqinisisa yoMthumeli inikeza oku kulandelayo:
Indawo yabucala -Le mveliso ikwenza ukuba uyenze configures idomeyini esetyenziselwa ukuthumela i-imeyile. Eli thambeka lisebenza njenge Dilesi ye-imeyile oyithumelayo. Ilifu lokuThengisa ngeNtengiso liyaqinisekisa ukuthumela kwakho i-imeyile kusetyenziswa iSakhelo soMgaqo-nkqubo weSender (SPF), iSazisi yoMthumeli, kunye nokuqinisekiswa kweDomainKeys / DKIM.
Idilesi ye-IP ezinikezelweyo -Le mveliso inikezela idilesi eyahlukileyo ye-IP kwiakhawunti yakho ukuze igama lakho libe lelakho ngokupheleleyo. Yonke imiyalezo yemeyile ethunyelwe kwiakhawunti yakho ngokuDlulisa amafu isebenzisa le dilesi ye-IP. Le dilesi ye-IP imele uninzi lwegama lakho lokuthumela.
Phendula uLawulo lwePosi -Le mveliso ilawula iimpendulo ozifumanayo kubabhalisi bakho. Unokwabela iifilitha zemiyalezo engaphandle kweofisi kunye nezicelo zokuzikhupha ekubhaleni.
Ukongeza, iphakheji iza kunye Ukufakwa uphawu kwiakhawunti, Apho Ilifu lokuThengisa liguqula iakhawunti yakho kunye nesizinda sakho esikhethiweyo. Le mveliso iguqula ikhonkco kunye nokusongelwa komfanekiso kwaye isuse zonke izingqinisiso kwiLifu lokuThengisa ukuthanda indawo yakho eqinisekisiweyo.
Umthumeli weVidiyo yePhakheji yokuNgqinisisa
Indawo yakho yabucala yenza ukuba ii-ISPs zingqinisise kunye nokunxibelelana ngokufanelekileyo nemicimbi kunye nomrhumeli wakho ngokusebenzisa iingxelo zokuhamba. Ngaphakathi kwiphakheji yokuNgqinisisa yoMthumeli, kuya kufuneka usete i-DNS yakho ukuze unike amandla uninzi lweedomain ekuthumeleni nasekuphenduleni, kunye nezitshixo zokuqinisekisa. Ngogqithiso lwedomain, ikwabizwa kanjalo abathunywa bommandla, Uhambisa kuphela inxenye yendawo yakho ekhoyo kwiLifu lokuThengisa njengenxalenye yoqwalaselo lwendawo yakho eqinisekisiweyo. Ilifu lokuThengisa lisebenzisa kuphela isizinda esichaziweyo kwimisebenzi efanelekileyo.
@ isampuli.domain.com MX Ivumela i-imeyile ithumele isebenzisa iiseva zokuThengisa zeLifu
bounce bounce.sample.domain.com MX Iingoma ze-imeyile zithumela kwaye zibhampa
mpendulo impendulo.sample.example.com MX Ivumela ukuPhendula uLawulo lwePosi ukuphatha amacebo okucoca kunye nokudlulisa iimpendulo kwiidilesi ezithile
kuhamba shiya.sample.domain.com MX Ivumela ababhalisile ukuba bazirhumele
umfanekiso umfanekiso.sample.domain.com CNAME Amanqaku okuThengisa amafu emifanekiso
umbono jonga.sample.domain.com CNAME Amanqaku ekuThengisweni kweLifu lokujonga njengeSeva zePhepha leWebhu
konqakrazo Cofa.sample.domain.com CNAME Amanqaku kuLuhlu lokuThengisa i-URL yokulandelela ukucofa
Maphepha iphepha.sample.domain.com CNAME Amanqaku kwintengiso ye-microsite kunye neeseva zekhasi lokufika.
ilifu cloud.sample.domain.com CNAME Amanqaku okuThengisa amafu kwiphepha lefu.
mta mta.sample.domain.com A Amanqaku kwidilesi ye-IP ezinikeleyo
isampuli.domain.com TXT Iqinisekisa i-DKIM kunye ne-DK Selector
@ isampuli.domain.com TXT I-SPF1-Isimo se-SPF sigunyazisa ukubamba umgcini kwi-mfrom yesazisi
bounce bounce.sample.domain.com TXT I-SPF1 yokubamba iqela
mpendulo impendulo.sample.domain.com TXT I-SPF1 yempendulo yomamkeli
Uyakufuna ngokupheleleyo ukufumana isatifikethi se-SSL sekhadi lasendle kwindawo yakho yeNtengiso yeLifu ukuze usisebenzise ngokunjalo. Iiakhawunti ezilungiselelwe ngeSAP ezingasisebenzisiyo isatifikethi se-SSL zibonisa indawo ekhuselekileyo yeNtengiso yeLifu kwiipropathi zemifanekiso kuMakhi woMxholo. Xa ufaka umfanekiso kwi-imeyile, i-URL kumhleli ibonisa ukuseta kwesizinda sakho ngokwesiko nge-SAP. Ikhonkco lekopi kwiphepha leepropathi zemifanekiso likhuphela idomeyini yesiko ukuze isetyenziswe kwii-imeyile, amaphepha okufika kunye nesikhangeli.
Idilesi ye-IP ishushu
Nje ukuba iPhakeji yokuNgqinisisa yoMthumeli iqulunqwe ngokupheleleyo, iidilesi ze-IP ezithunyelwayo mazibe njalo kushushu. Oku kwaziwa njenge Ukufudumala kwe-IP. Kungenxa yokuba ii-ISPs azinagama linxulumene nedilesi ye-IP. Ukuba uqala ukuthumela yonke into ngoqwalaselo olutsha, kukho umngcipheko omkhulu wokuvalwa. Unxibelelwano oluninzi oluvela kwiidilesi ezintsha ze-IP yimizamo yokuhambisa umyalezo ongafunekiyo okanye enye imeyile engafunekiyo, ke ii-ISP ziyarhanela idilesi entsha ye-IP yokuthumela imeyile.
Ufuna uncedo? Amaqabane am kunye nam e Highbridge sazise iqonga lethu, IP eshushu, Ukucoca idatha yakho, ukubeka phambili ukuthumela kwakho, kunye nokubonelela ngoluhlu lwakho lwephulo kunye neeshedyuli zokunciphisa umngcipheko wemicimbi yokuhanjiswa kunye nokukhawulezisa igama lakho lokuhanjiswa.
Douglas Karr, VP ye Highbridge
Ezona zikhulu ze-ISPs kunye nabanikezeli ngeimeyile bacebisa ukuba wakhe igama lokuthumela kuyo nayiphi na idilesi entsha ye-IP ngokuthumela ngokuthe ngcembe nangendlela yokwenza imiqulu emincinci, emva koko ngokuthe ngcembe unyuse umthamo wakho weposi enqwenelekayo kubasebenzisi babo. Olu dumo lokuthumela lubizwa ngokuba yi ukufudumala or ukukhwela phezulu kwidilesi yakho entsha ye-IP.
Injongo kukwakha malunga neentsuku ezingama-30 zembali yokuthumela enqwenelekayo kunye nedatha ukuze ii-ISPs zibe nombono weposi evela kwidilesi yakho entsha ye-IP. Ixesha lokuhamba linokuthatha ixesha elingaphezulu kweentsuku ezingama-30 kwabanye abathumeli kunye nexesha elifutshane kwabanye. Izinto ezinje ngobungakanani boluhlu lwakho lulonke, uluhlu lodidi, kunye nokuzibandakanya kwababhalisileyo kunokuba nefuthe kubungakanani bexesha elithathayo kwidilesi yakho ye-IP.
Ilifu lokuThengisa licebisa ukuba ujolise ekuthumeleni kubabhalisi bakho abasebenzayo nababandakanyekayo ngeli xesha libalulekileyo kuba inokuba sisiseko sokuqala se-ISPs ukumisela iidilesi zakho ze-IP zokuthumela igama. Ukuhlengahlengisa kubandakanya ukuthumela inani eliqingqiweyo lemiyalezo nge-IP nganye ngosuku, ke kunokuba yimfuneko ukuqhubeka uhlengahlengisa iindlela ozithumela ngoku njengenxalenye yenkqubo.
Ukuba unemibuzo okanye ufuna uncedo ekuphumezeni esweni inbox okanye ufuna uncedo ekuqwalaseleni eyakho Iphakheji yokuNgqinisisa yoMthumeli, ungacela uncedo kwinkampani yam entsha, Highbridge. SiliQabane elitsha le-Salesforce kwaye siwenzile lo msebenzi ngamakhulu emibutho. Sinokusebenza nommeli wakho we-Salesforce kwaye sikulungiselele ngokupheleleyo, ufudumale, kwaye uthumele ii-imeyile!
tags: 250okUphawu lweakhawuntiidomeyini yesikoizinikele ipukuhanjiswaUkucwangciswa kwe-dnsuphawu lwe-imeyilesphighbridgeIP igamaip kushushuip ukufudumalailifu lokuthengisaindawo yabucalaphendula ulawulo lweposiukuthengisantshizaIphakheji yokuqinisekisa yomthumeliimeyile ye-sslikhadi lasendle sslabathunywa bommandla
Ukufudumala kwe-IP: Yakha igama lakho elitsha ngesi sicelo sokufudumala se-IP